Cunnooyinka leh fitamiin C si loo adkeeyo difaacaaga | Ragga Stylish
Ku darista cuntada leh fitamiin C-ga cuntadaada ayaa fure u ah ku raaxeysiga caafimaadka wanaagsan. Waana taas waa fiitamiin aad muhiim ugu ah jirka.
Jirka ma kaydin karo ama soo saari karo kaligiis. Laakiin looma baahna in laga walwalo, maadaama, si joogto ah loo wada cunay, Cunnooyinka soo socda ayaa kaa caawin doona inaad daboosho baahiyahaaga fitamiin C dhibaato la'aan.
1 Immisa fiitamiin C ah ayaan ubaahanahay maxaase loogu talagalay?
1.1 Ma heshaa kaalshiyam kugu filan?
2 Sida looga helo fiitamiin C-ga cuntada
2.9 Brussels ayaa soo baxday
2.12 Cawska loo yaqaan 'Strawberries'
2.13 Aan tayo lahayn
Immisa fiitamiin C ah ayaan ubaahanahay maxaase loogu talagalay?
Sidoo kale loo yaqaan ascorbic acid, kaalmada maalinlaha ah ee lagugula taliyo ee fitamiin C waa 90 mg, 2.000 mg oo ah xadka ugu badan. Waxaa jira waxyaabo dheeri ah oo laga helo fitamiin C, laakiin haddii aad cuntid cunto kaladuwan, oo ay ku badan yihiin miraha iyo khudaarta, waa inaanad dhibaato ku qabin inaad la kulanto baahiyahaaga maalinlaha ah.
Doorka muhiimka ah ee fiitamiin C-ku ka ciyaaro habka difaaca jirka iyo kahortaga cudurka. Si kastaba ha noqotee, fiitamiin C wuxuu kaloo caawiyaa inuu dhuuqo birta khudradda. Sidan oo kale, waxaa lagugula talinayaa in la isku daro khudradda birta ku badan (digiraha ayaa ka mid ah) iyo cuntooyinka leh fitamiin C.
Faa'iidooyinka fiitamiinkan antioxidant-ka waa mid laga dareemi karo xaaladda maqaarka, lafaha iyo ilkaha.
Ma heshaa kaalshiyam kugu filan?
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka leh kaalshiyam. Halkaas waxaad ka heli doontaa waxaad cuni lahayd si aad uhesho kalsiyum kugu filan si aad u adkeysid lafahaaga.
Sida looga helo fiitamiin C-ga cuntada
Si ka duwan fiitamiinada kale, fiitamiin C-ga waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo cuntooyin ah, gaar ahaan khudradda iyo khudradda. Intaas waxaa sii dheer, in badan oo ka mid ah cuntooyinka leh fitamiin C-ka ayaa ah cuntooyinka caadiga ah, qaar badan oo ka mid ahna laga yaabo inay horayba qayb uga yihiin cuntadaada.
Waa in la ogaadaa in fitamiin C si fudud u xumaado, taas oo ah sababta loo talin karo in la cuno cuntooyinka soo socda oo dhan iyo kuwa cayriin markasta oo ay suurtagal tahay:
Qaybta ugu muhiimsan ee caafimaadka leh Cuntada Biyaha, khudraddan isku dhafan waxay aad ugu badan tahay fitamiin C. Basbaaska huruudda ah ayaa ah noocyada ugu badan ee bixiya fiitamiin C-ga (184 mg 100 kii garaam), waxaa ku xiga casaan iyo cagaar.
Ku darista qaar ka mid ah xaleefyada yaanyada saladhkaaga iyo sandwiches-ka ayaa kaa caawin doona inaad xoojiso difaacaaga mahadsanidiin qiyaasta fitamiin C.
Ma ogtahay in ku darista waxoogaa dhir cusub ah inay ku siiso fitamiin C? 100 garaam oo cuntadan ah ayaa ka kooban 133 mg oo fitamiin C ah.
Miraha liinta ayaa ah isha ugu caansan ee laga helo fitamiin C. Liinta quraacda ama macmacaan ahaan waxay kuu dhowdahay qadarka maalinlaha ah ee lagugula taliyay. Liin dhanaanta, liinta, liin macaan, iyo bambeelmo sidoo kale waa xulashooyin aad u fiican oo lagu heli karo fitamiin C.
100 garaam oo kale ayaa bixiya 120 mg oo fitamiin C ah, taas oo khudaartaan ka dhigeysa meelaha ugu wanaagsan ee laga helo fiitamiinkan. Si tartiib ah isaga uumi si aadan ugu lumin fitamiin C-ga badan hawsha.
Haddii aad ka mid tahay dadka baradhada jecel, nasiib baad ku jirtaa. Waana taas cuntadani waxay ka dhigan tahay qiyaas wanaagsan oo fiitamiin C ah, iyo sidoo kale nafaqooyin kale.
Waa midho aad u weyn caafimaadka, gaar ahaan ilaalinta ama kordhinta heerarka fitamiin C ee jirka. 100 garaam oo kiwi ah ayaa kuu oggolaanaya inaad dhaafto inta lagugula taliyay 90 mg maalin kasta ee fitamiin C. Waxtarka ay siiso fitamiin C ayaa ka badan tan liinta.
Qaniimadiisa fitamiin C waa mid kamid ah faa iidooyinka badan ee broccoli uu u leeyahay caafimaadkaaga. 100 garaam oo broccoli ah ayaa la mid ah RDA ee fiitamiin C. Waa run in xaddiga fiitamiin C-ka la yareeyey ka dib karinta, laakiin weli waa cunto aad u xiiso badan in la helo qaddar wanaagsan oo fitamiin C ah, iyo sidoo kale nafaqooyin kale oo muhiim ah.
Kiiska billowga Brussels ficil ahaan wuxuu la mid yahay kan broccoli. Saliida ceyriin wey kudhowyihiin 90 mg oo fitamiin C ah 100 garaam oo cunto ah. Si kastaba ha noqotee, karinta waxay sababtaa in fitamiin C-ga uu yaraado. Si kastaba ha noqotee, sida broccoli, wax badan ayaad ka faa'iidi kartaa ku darista cuntadaada.
Midhahan ayaa ah ku habboon in la siiyo taabasho kuleyl leh oo kuleyl ah cuntadaada xilliga xagaaga. Waxaa kujira fitamiin C, hilibka babayga wuxuu ka sameeyaa koox macaan oo caafimaad leh khudaarta cagaaran ee cagaaran.
Haddii aad jeceshahay miraha kulaylaha, cananaaska ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad hesho qadar fiican oo fitamiin C ah.
Haddii aad u baahan tahay fiitamiin C ka badan, strawberries waa ikhtiyaar weyn. Dhowr miro yar oo 'strawberries' ah ayaa kugu soo dhoweyn doona kaalmada maalinlaha ah ee lagula taliyo. Waxa kale oo xusid mudan ka qayb qaadashada manganese, folate iyo potassium.
Qani ku ah fiitamiinnada iyo macdanta (oo ay ku jiraan qiyaastii 50 mg oo fiitamiin C ah 100kii garaam ee cuntada ah), tayo-beelku wuxuu bixiyaa nafaqooyin badan oo kalooriya aad u tiro yar. In sidan, waa cunno aad u fiican in la helo fitamiin C oo la jaanqaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntooyinka leh fitamiin C
Aad u xiiso badan mawduuca ku saabsan fitamiin C